blog | Mg Ogga's Notes
ကိုဇော့ က တဂ်ပိုစ့်ရေးခိုင်းထားတာ ကြာပါပြီ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်အပျင်းကြီး နေတာ က တကြောင်း အခု မှ စရေးတဲ့ ogga.myanmarpress.com ကို ပြင်ဆင်နေတာက တစ်ကြောင်း နဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။အခုမှပဲ ရေလိုက်ပါတယ် ကိုဇော့ရေ ဟိုအရင်က သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ် မာမီရယ်ရှာ ပေးကွယ် ရည်းစားလိုချင်တယ် ဆိုတဲ့ သီချင့်းပါ အခု တော့ မာမီကို အားကိုးစရာမလိုတော့ပါဘူး ဂျီတော့ မှာ ကျုပြီး ရည်းစား အမြောက်အမြား ရနိုင်ပါပြီ။ ဒါဟာကောင်း သလား မကောင်းဘူးလားတော့ မသိ တော့ ပါဘူး ဂျီတော့ ကို ကောင်းကောင်း အသုံးချရင် ကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေ မနည်းပါဘူး ဒါပေမဲ့ လွဲလွဲမှားမှား အသုံး ပြု…
June 24, 2013 in ဆောင်းပါး, တွေးမိတွေးရာ.
ဘလော့ဂ်နာကျ လေပွသောခါ။ ကီးဘုတ်ကိုဆွဲ၊ စိတ်အားကို ခဲကာ။ ရှည်ကြာထိုင်လစ်၊ ပို့စ်အသစ် ထွက်မလာ မုဒ်ပျောက်စိတ်ထွေ၊ ဝေလေလေ. ရေသာသောက်၍ အိပ်သည်နှင့်လေး။ ။ ဂူဂယ်လ်ရီဒါ၊ ပို့စ်သစ်တွေ တက်လာ သူများတကာရေးပုံ၊ နည်းစုံကြည့်ကာ ငါလည်း ဒီတစ်ခါ၊ အဟုတ်တကယ်ရေးမှာ လုပ်မယ်တကယ်ဟ၊ အားမာန်ပြ နွမ်းလျစိတ်လေ၊ ပို့စ်မရချေ လိပ်ခွေနုံးလျက်၊ ဂျီတော့ခ်မှာချက် လက်သာညောင်း၍ အိပ်သည်နှင့်လေး။ ။ စာရွက်ပေါ်ဝယ်၊ အသွယ်သွယ်ရေးခါ သုတရသ၊ နည်းပညာခွဲရာ ၀မ်းသာအားရ၊ ရေးပြမည်လေ စိတ်မထွေတမ်း၊ မရမကဖမ်း ပွဲကြမ်းသည်ကြောင့်၊ မုဒ်ပြန်ပျောက် စားပွဲပေါ်မှောက်၍ အိပ်သည်နှင့်လေး။ ။ ယူကျူဘ်ဝင်ချက်၊ ပို့စ်သစ်တွက်ရှာ ဆားချက်မည်ပေါ့၊ စိတ်ဖော့ထားခါ နားထောင်လေရာ၊ သီချင်းထောင်တစ်ရာ ခေါင်းတွင်တွင်ကုတ်၊ ပို့စ်ထုတ်မရပါ စွေ့စွေ့ကယ်ခုန် လူတောင်တုန် ရှိသမျှ ဘရောက်ဇာ၊…
February 1, 2009 in ကဗျာ, ဟာသသရော်စာ.